swimming pool Archives - LODGGY
ဒီအပတ် Review ကတော့ ? ပုဂံနဲ့ ကျိုက်ထို တို့မှာ နာမည်ရပြီးသား Bawgatheiddhi Hotel Group ရဲ့ ငပလီကမ်းခြေမှာ ၂၀၁၇ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှ အသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ BT Bay Ngapali အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ??? ? တည်နေရာ BT Bay Hotel ဟာဆိုရင် နာမည်ကျော်ငပလီကမ်းခြေ ⛱တစ်နေရာဖြစ်တဲ့ လင်းသာရွာတွင်တည်ရှိပြီး…
“မိသားစုလိုက် အဖွဲ့လိုက် တွေအတွက် မီးလှုံ ဖို့ bon fire လုပ်တဲ့နေရာလည်းပါဝင်ပါတယ်” အခုလို ချမ်းချမ်းစီးစီး ဆောင်းတွင်းလေးမှာ အင်းလေးကို သွားရောက်အပန်းဖြေအနားယူချင်သူတွေအတွက် Amata Garden Resort နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Garden Resort ဆိုတဲ့အတိုင်း တကယ့်ပန်းဥယျာဉ်အကျယ်ကြီးရှိတဲ့ ဟိုတယ်ပါ။ အခုမကြာသေးခင်က လည်း အခန်းသစ်တွေပါတဲ့ သုံးထပ်ဆောင် အဆောက်အုံသစ်ကိုထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ ? ဟိုတယ်အနေအထား Amata…